China One Moniter Miaraka amin'ny orinasa 7 Blades sy mpamatsy | tana
Mole Video Laryngoscope dia ahafahan'ny mpitsabo manaparitaka marary amin'ny andrana voalohany amin'ny fanandramana manararaotra ny ratra mety hitranga mandritra ny fomba fanao amin'ny alàlan'ny fijerena tsara ny firafitry ny glottis.
Miaraka amin'ny fakantsary fijery feno 2.0MP, ny Mole Video Laryngoscope dia manana ny tombony ho mpanara-maso avo lenta. Izy io koa dia manana fahaizana manohitra ny zavona tsy manam-paharoa (tsy mila miandry fiomanana mialoha) ary famolavolana ergonomika azo entina.
Tombony amin'ny klinika
Mole Video Laryngoscope dia noforonina ergonomika hisorohana ny ratra ateraky ny firafitry ny laryngealy noho ny fampidirana. Ny fahafahan'ny mpitsabo manatsara ny fahombiazan'ny fidiran'ny tracheal ary ny fijerin'ny optika ny firafitry ny laryngeal.
Fampiasana manohitra ny zavona tsy manam-paharoa
Ny fiasan'ny anti-fogging dia ampandehanana amin'ny herinaratra tsy misy fiomanana mialoha.
Ny tahony dia manana endrika ergonomika ahazoana aina ary manohitra mikraoba.
Maivana, singa lehibe dia latsaky ny 350g.
Ny blades azo ampiasaina dia azo esorina amin'ny alàlan'ny plastika entona hidrozenina peroxyde na fanosorana anti-mikraoba ary ampiasaina indray.
Ny haben'ireo kofehy 7 azo ampiasaina indray miaraka amin'ny Video Laryngoscope dia azon'ny mpanjifa safidiana mifanaraka amin'ny filan'izy ireo. Ny habe azo ampiasaina dia ny Miller 0 sy 1, ary ny Macintosh 1, 2, 3, 4, ary 5.
Ny fampisehoana azo ampiasaina dia monitor monitor 3 ″ feno ary afaka manohitra ny famafana miverimberina sy ny fampiasana mahazatra. Izy io dia ampiasain'ny bateria lithium mahazaka 200 minitra isan-kerinandro miaraka amin'ny androm-piainany 3 taona.
Mitondra valizy (1x)
Laryngoscope Blades azo ampiasaina azo ampiasaina (3x)
Teo aloha: Moniter iray miaraka amin'ny lelany 5
Manaraka: Moniter iray miaraka amin'ny lelany 10
Laryngoscope Stainless Steel maharitra